Lalao fiaramanidina sy fitifirana, ny sasany mampiala voly ary maimaim-poana | Ubunlog
Lalao fiaramanidina sy fitifirana, fialamboly ary maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hojerentsika lalao sy fitifirana fiaramanidina vitsivitsy. Ubuntu dia manolotra lalao amin'ny lohahevitra samihafa. Ary satria tsy miaina amin'ny lalao fanabeazana fotsiny ny mpampiasa, eo amin'ireo azo alaina ao amin'ireo trano fitahirizam-boky amin'ity fizarana ity dia afaka mahita izay mahafinaritra sy mampiala voly isika, toa an'ity karazana fiaramanidina sy tifitra ity.
Ireo lalao rehetra izay ho hitantsika manaraka Tienen fahazoan-dàlana lozisialy maimaim-poana ary azo jerena ao amin'ny repository Ubuntu. Amin'ireto andalana manaraka ireto dia hahita famaritana fohy momba ny tsirairay amin'izy ireo sy ny torolàlana hametrahana azy ireo izahay.
1 Lalao fiaramanidina sy fitifirana maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
1.5 Lanitra tsy misy farany
1.6 misokatra mpanafika
1.8 Val sy Rick
Lalao fiaramanidina sy fitifirana maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Izy io dia sambon-habakabaka 3D sy lalao ady. Io dia ahafahanao manamboatra ny sambonao, ary mividy / mivarotra fitaovam-piadiana handresena ny fahavalo rehetra ary handresy ny haavony. Atao amin'ny totozy io mba hivezivezy eo amin'ny efijery ary hitifitra. Fampahalalana bebe kokoa ao anatiny Repository GitHub.
Amin'ity lalao ity dia hampiasa fiaramanidina fomba arcade maoderina tena izy isika. Ao amin'ny Chrome BSU tsy maintsy mitandrina isika mba tsy hahavery ny teboka ara-pahasalamana rehetra mandritra ny famongorana ny fahavalo. Ny totozy ihany no lalaovina hamindra ny fiaramanidina sy hitifirany ny ambaratonga tsirairay. Tsy tokony hafangaro amin'ny browser Chrome. Fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa.
Ity dia lalao shooter an-tsekoly taloha an-tsekoly, miaraka amin'ny sarintany, afo anoloana sy aoriana, maze habakabaka marobe ary fahavalo resy. Manolotra fiainana 5 tsy misy isa ara-pahasalamana, Ka rehefa mifandona amin'ny fahavalo ianao dia ho rava ny sambonao. Fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny tranokala lalao.
Ity lalao ity dia natao tany Arzantina. Lalao shooter fiaramanidina kilasika, arcade na SEGA, miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mividy / mivarotra ary isa amin'ny fahasalamana. Azontsika atao ny mampiasa ny totozy hihetsika sy hitifitra. Amin'ny alàlan'ny default, mitondra basy poleta Gattling ianao, fa afaka mividy baomba sy balafomanga. Tsy voafetra ny fitaovam-piadiana. Afaka mahita bebe kokoa momba ity lalao ity ianao ao amin'ny pejy web ny momba azy.
Lanitra tsy misy farany
Lalao Adventure, varotra ary ady amin'ny habakabaka misy tantara maro. mpanao gazety M hijerena ny sari-tany ary hisafidy izay alehany, J mitsambikina, N misafidy sambon-danitra eny akaiky eny, ankoatra ny Tab mitifitra. Lalao sarotra io raha oharina amin'ny hafa, izany no antony mahaliana ny maka azy jereo ny boky fampianarana izay nanondroana ny fomba filalaovana.
Ity lalao ity dia mampatsiahy tokoa ny vanim-potoana volamena an'ny SEGA sy Nintendo consoles. Lalao mahazatra sy Retro ny mitifitra ny fahavalo rehetra amin'ny sambon-habakabaka misy antsika. Ampiasao ny zana-tsipìka fitifirana handehananao ary fiovàna mitifitra, P miato ary Q mivoaka. Resy ny fahavalo rehetra hamaha ireo entana mihidy isan-karazany.
Izany no lalao shooter habakabaka tsy manam-paharoa. Hifindra sambon-danitra fehezin'ny hery misintona ianao handrava ny sambon-danitra fahavalo na an'ny mpilalao faharoa. Ny fomba lalao isan-karazany dia atolotra anao, ao anatin'izany ny matchmatch. Ampiasao ny zana-tsipìka fitifirana mba hifindra ary Ctrl hitifitra. Afaka mahafantatra bebe kokoa momba ity lalao ity ianao ao aminy Repository GitHub.
Val sy Rick
Farany, Adventure iray hafa eny amin'ny habakabaka. Tsy maintsy tazomy ny lakile Ctrl ary ampiasao ny lakilen'ny zana-tsipika hifindra ary manimba ny fahavalo habakabaka rehetra.
Ity lisitry ny lalao ho an'ny olona nostalgia amin'ny fotoana hafa ity dia feno amin'ny en ubuntuzz, izay ilay tranonkala nahitako azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Lalao fiaramanidina sy fitifirana, fialamboly ary maimaimpoana ho an'ny Ubuntu
Spivak, mpilalao karaoke loharano malalaka sy misokatra
Mobian, ny kinova finday an'ny Debian izay azontsika ampiasaina toa ny PC kely